ट्रम्पको जितको तरङ्ग कुन रुपमा आइपुग्ला नेपाल ?
चुनाव अमेरिकाको भएपनि संसारकै शक्तिराष्ट्र भएकाले ध्यान कमजोर राष्ट्रको पनि तानेको थियो । विश्व शक्ति राष्ट्रको नेतृत्व कसको हातमा जाला र कडा प्रतिस्पर्धामा रहेका दुई उम्मेदवार रिपब्लिकन उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प र डेमोक्रयाटिक उम्मेदवार हिलारी रोदम क्लिनटनप्रति विश्वको ध्यान तानिएको थियो । संसारको जनमत हिलारीको पक्षमा बढी देखिन्थ्यो तर अमेरिकी मतदाताको मत ट्रम्पको पक्षमा गयो र उनी नै अमेरिकाको ४५औं राष्ट्रपतिका रुपमा विजयी भए । अब उनको जीतपछि उनले लिएका नीतिका पत्रहरु केलाउँदै आम मानिस र देशहरु समेत त्यसको असर लेखा–जोखा गर्न थालेका छन् ।
शक्तिशाली देश चीन र भारतमा मिश्रीत प्रतिक्रिया आएका छन् । चीनमा केहीले ब्यवसायीक रुपमा सफल ट्रम्प शासनकालमा पनि सफल हुने बताएका छन् । चीनका युवाका लागि उनी रोल मोडल बन्ने केहीले विश्लेषण छ । तर केहीले ट्रम्प निर्वाचित हुनुलाई एसियाको दुर्भाग्य मानेका छन् । उनीहरुले भनेका छन् ‘एउटा धनी व्यक्तिले सत्ताको बागडोर सम्हालेका छन् उनी त्यहाँ पुग्नु महिला र आप्रवासीका लागि खतरा मान्न सकिन्छ । ’ भारतमा भने ट्रम्पको जीतमा सडकमा जुलुस नै निस्किएको छ । मोदी सरकार पनि उनको समर्थनमा देखिन्छ । दुई ठूला छिमेकीको बिचमा रहेको नेपालमा त्यसको असर के पर्ला ? नेपालको धारणा के रहला ? राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परम्परा अनुसार बधाई दिएपनि सायद सरकारले जीतका विषयमा ठीक वेठिक धारणा बाहिर ल्याउने छैन् । कुटनीतिमा त्यो धारणा बाहिर ल्याउन पनि हुन्न । तर, ट्रम्पको जितसँग जोडिएका केही एजेण्डाले नेपाल र नेपालीमाथि असर भने अबश्य पर्नेछ । आप्रवासीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा हिलारी भन्दा ट्रम्प खरो रुपमा निस्किएका थिए ।
लामो समय सत्तासँगै जोडिएका हिलारी क्लिन्टन विश्वसमुदायका लागि नयाँ पात्र होइनन् । त्यसकारण विव समुदाय उनको पक्षमा देखियो । अमेरिकाका ४२ औँ राष्ट्रपति बिल किलिन्टनकी जीवनसंगिनी हिलारी झण्डै तीन दशकयता अमेरिकन जनताका लागि परिचित पात्र हुन् । नेपालको भ्रमण समेत गरिसकेकाले उनको पक्षमा धेरै नेपालीको सहानुभूति देखिन्थो । राजनीतिक नेतृत्व पनि उनको पक्षमा थियो । तर, विदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खरो रुपमा देखिएका ट्रम्पका कारण विश्व शक्ति अमेरिकाको चुनाव अमेरिकाका लागि मात्र होइन ट्रम्पका कारण विश्वजगतकै लागि थप चासोको विषय बनेको थियो । ट्रम्पलाई सायद त्यहाँका नागरिकले त्यही मुद्दामा राष्ट्रियतासँग जोडे र राष्ट्रपतिमा बिजयी गराए ।
ट्रम्प सत्तामा आएकाले अब उनले लिएको अमेरिकी नीति आक्रामक हुनेछ । आप्रवासीका सम्दर्भमा उनी खरो रुपमा आउनेछन् । सात समुन्द्र वर रहेको नेपालमा त्यसको प्रत्यक्ष असर नदेखिएपनि अमेरिकामा रहेका लाखौ नेपालीमा त्यसको असर देखिनेछ । त्यसकारण पनि त्यसको केही प्रभाव काठमाडौंसम्म देखिनेछ । ट्रम्पको मुख्य निसाना मुस्लिम देश रहेकाले नेपालसम्म उनको आँखा खासै पर्ने देखिन्न । तर ट्रम्पले नेपालमा निकट छिमेकी र विश्व शक्तिमा उदयमान चीन र भारतसँग कस्तो सम्बन्ध राख्छन त्यसैको प्रभाव नेपालमा देखिनेछ ।
2314 पटक पढीएको
तराई विखण्डनको प्रारुप र भारतीय अभिष्ट
जनताको अवस्था जहाँको त्यहीँ, माननीयहरुको सुविधा वृद्धिमा बलमिच्याई ?
श्रमिक पक्षीय श्रम कानूनको आवश्यकता
सामवाङ, गगन थापा र नेपाली लोकतन्त्र !